Iimaphu zikaGoogle zisinika ithuba lokongeza iindawo zokumisa kwiindlela | IPhone iindaba
UGoogle uyaqhubeka nokuphucula ukusetyenziswa kwemephu imihla ngemihla. Ku-Okthobha ophelileyo inkonzo yewebhu yeGoogle Maps Inkulumbuso yenqaku elitsha esivumele ukuba songeze izitopu endleleni ngaphakathi kwendlela esele itsaliwe. Esi sixhobo sitsha sifikile nje kwisicelo seMaphu zikaGoogle kuhlaziyo lokugqibela olufunyenwe sisicelo.
Eli nqaku litsha ivumela ukuba songeze iindawo zokumisa apha endleleni, kwindlela ebesiyimisile ngaphambili, ngaphandle kokuphinda sisebenzise indlela xa siyishiya, nokuba sibeka igesi, siyitya kakuhle, okanye kuba sigqibe kwelokuba sityelele isixeko ebesingahambanga.
Ukuze sikwazi ukumisa iindawo zokumisa ngaphandle kokumisa indlela, kuya kufuneka ucofe kwiglasi yokukhulisa esisinikwa sisicelo. Xa ucinezela kuye, ukhetho oluninzi luya kuvela yongeza isitopu endleleni yekofu, isidlo sasemini, ukuthenga, igesi… Akucetyiswa ukuba ususe amehlo ethu xa siqhuba, kwaye ngenxa yoku, sinokongeza iindawo zokumisa kwindlela ngokusebenzisa imiyalelo yelizwi. Isicelo siza kongeza ixesha eliqikelelweyo esiza kulithatha kwindawo yokumisa kubonke bendlela.
Kodwa olu hlaziyo ayilulo lodwa olongezwe nguGoogle kolu hlaziyo kwisicelo, kodwa kananjalo isinika umsebenzi we-3D Touch ukufumana izikhombisi ngokukhawuleza ekhaya kunye nokusebenza ngokucinezela nokubamba i icon yeMephu zikaGoogle.
I-Apple kufuneka iqhubeke nokubeka iibhetri kwinkonzo yayo yemephu, ukuba ufuna ukusondela kuyo yonke imisebenzi uGoogle angayinikeliyo ngoku ngenkonzo yemephu, zombini ngewebhu nangokusetyenziswa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » Iimaphu zikaGoogle zisinika ithuba lokongeza iindlela zokumisa ezindleleni
UCarlos, uMX sitsho
Ewe ndinee-6s kunye kwaye akukho nto iphumayo nge-3D touch kwi-icon yesicelo.
Phendula uCarlos, MX
Uyifaka njani iClash Royale ngoku kwi-iPhone yakho, kwi-iPad okanye kwi-iPod Touch